Kenya: Hayadaha Xuquuqal Insaanka oo Booliska Dalkaasi Eedeeyey - Wargane News
Home World News in Somali Kenya: Hayadaha Xuquuqal Insaanka oo Booliska Dalkaasi Eedeeyey
Kenya: Hayadaha Xuquuqal Insaanka oo Booliska Dalkaasi Eedeeyey
Laba urur oo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda ah ayaa ku booriyey dawladda Kenya in ay baadho oo ay la xisaabtanto askarta booliska ah ee lagu eedeeyey in ay laayeen tobanaan qof intii ay socdeen mudaharaadii dhacayey doorashadii madaxtinimada ee bishii August ka dib.
Warbixin ay soo saareen Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa booliska ku xidhiidhisay dhimashada ku dhawaad todobaatan qof oo lagu dilay dalka oo badankoodu ku dhinteen caasimadda Nairobi.
Warbixintu waxay ku eedaynaysaa booliska in ay xiisadda taagan sii cakireen maadaama oo ay ciidan aad u xoogan dhigeen goobaha qalalaasuhu ka dhici karayey. Waxaanay ururadaa xuquuqda aadanaha u doodaa sheegeen in adeegsiga awoodda xad dhaafka ahi hab dhaqan u noqotay hawl gallada booliska Kenya.
Todobaadkii hore ayaa musharaxii isbahaysiga ugu wayn mucaaradka, Raila Odinga, wuxu ka baxay tartanka doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee la qoondeeyey in la qabto dabayaaqada bishan. Waxaanu sheegay in aanu rumaysnayn in la qaban karo doorasho xor ah hadii aan dib loo habayn hannaanka doorashada ee dalka.
Rabshadaha Doorashooyinka kenya
Israa’iil oo nin Carab ah ku maamuustay abaalmarinta ugu sarraysa